२५ लाख रुख काटेर टर्कीले बनायो संसारकै ठूलो एयरपोर्ट, निजगढ कहिले ?
काठमाडौं । टर्कीले संसारकै सबै भन्दा ठूलो बिमानस्थल निर्माण गरेको छ । यो बिमानस्थल निर्माणका क्रममा २५ लाख रुख काटिएका छन भने ७ हजार ६ सय हेक्टर समुन्द्रको जमिन उपयोग गरिएको छ । टर्कीको राजधानी स्तानबुलमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको लागत ५१ बिलियन अमेरीकी डलर रहेको छ ।
विमानस्थलको पहिलो खण्डको टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप इर्दोगानले उद्घाटन गरेका हुन् । बिमानस्थलको पुरै खण्ड भने एक बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याईसक्ने योजना रहेको छ । विमानस्थलमा ६ वटा रन वे छन जसले बार्षिक २० करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ ।
यो विमानस्थलको एयर कन्ट्रोल टावरले सन २०१६ को उत्कृष्ठ आर्किटेक्चर अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेको छ । सन २०१३ मा टर्कीका पाँच वटा निर्माण कम्पनीहरुको कन्सोर्टीयमले २९ बिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा यो बिमानस्थल तयार पारिएको हो । निर्माण कर्ता कम्पनीहरुले २५ बर्षसम्म सञ्चालन गरेर विमानस्थल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
३६ हजार कामदारले काम गरिरहेको यो विमानस्थल निर्माण गर्दा हालसम्म ४ सय जनाले ज्यान गुमाईसकेको आरोप छ । एसिया र युरोपलाई जोड्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा स्तानबुल बिमानस्थल निर्माण गरिएको हो । हालसम्म युरोप र एसियालाई जोड्ने विमानस्थलका रुपमा युएई र कतारका विमानस्थलहरु उपयोग हुँदै आएका थिए ।
निजगढ कहिले ?
नेपालमा भने विगत २३ बर्षदेखि दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेपनि अझै काम सुरु गरेको छैन् । निजगढमा बनाउने निर्णय गरिएको भए पनि वन र वातावरणका नाममा अवरोध सृजना भएको छ ।
निजगढमा एयरपोर्ट सीटीसहित २५ हजार हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा अहिले ८ हजार हेक्टरमा निर्माण गर्न लागिएको हो । जसमा ७ लाख रुख काटिनेछन् । तीममध्ये १ लाख ९४ हजार ठुला र बाँकी साना रुख हुनेछन् ।